China abuo elektrọniki eletrik eletrik energy ụgbọelu, lora, gprs） na ndị na-eweta ya | IGBO
Single frasi din okporo ụzọ ume elekere （remote）
3Pave elekere eletịgo elekere eletrik (ic kaadi)
Single frasi ume mita （n'ime obodo + modulu）
Single eletriki ume eletrik
Mita mmiri mmiri dịpụrụ adịpụ Smart
Single frasi electronic ene ...
Atọ electronic ener ...
Single-phase mfe multi-f ...
Uzo abuo LCD agbakwunyere di ...
Din train one phase energ ...
Igwe izipu okpukpu ato okpukpu ato / okpukpu okpukpu ato nke batara diiri nma ma tinye kwa mgbazi ike. Igwe okwu nkwukọrịta nke jikọtara ya na ntụkwasị obi ya erutewokwa ogo nke ezigbo ọrụ bara uru. Ọ na - agbakwunye teknụzụ nnabata dijitalụ na sistemụ SMT, ma hazie ya ma rụọ ya dịka ike nke ndị ọrụ si arụ ọrụ.
1. Ire na-ere azụ, dị mfe ịwụnye
2. Ọrụ tụọ ike ọrụ ma rụkwaa ọrụ, nwere ike igosipụta oge, koodu mkpu, wdg.
3. Site na ọrụ nke ịmepe ndekọ mkpuchi, enwere ike ịjụ ya iji gbochie izu ohi eletrik.
4. Mita ike nwere ọrụ nke tarifu ọtụtụ (ọnụego mgbanwe)
5. Ime na usoro nchịkwa ego ụgwọ mpaghara
6.Communication usoro: RS485, infrared
7. O nwere ọrụ nke ikpochapụ mita ahụ, nke dabara adaba ma nwee ike iji ya rụọ ọrụ.
8.Mfe ụgbọelu na - ekwu okwu site na netwọ akara ahịrị na - enweghị mkpa ịdọrọ waya ọzọ.
1.Ngosiputa ya na ihe ngosi LCD nwere nkuku nlere anya na odi iche di elu
2.Pinye teknụzụ nhazi dijitalụ na usoro SMT.
3.Voltage sampling loop na-anabata ike ịgbanye voltaji
4.The isi ọrụ: mmesho na ịchọpụta, njikwa fee ime, asambodo nche na izo ya ezo, ngosi, ndekọ ihe omume, ifriizi, oge, out esi, wdg.
5.Manganese ọla kọpa shunt na NB module:
Ihe dị ugbu a na-adọtị akaghịji nwere nnukwu ọla kọpa manganese dị obosara.
NB modul: IoT ịkparịta ụka n'ikuku, ike dị ala. Na-akwado njikọta arụmọrụ dị elu maka ngwaọrụ ndị chọrọ njikọta netwọkụ dị elu
6.Carrier modul: Kwurita okwu na nkwukọrịta ike na-enweghị mkpa maka eriri ndị ọzọ.
Lora modul: ogologo nkwukọrịta ikuku na-akparịta ụka ikuku na-anya.
Modulu GPRS: netwọ ọha ọha na eze (netwọkụ 2G).
Selectionzọ nhọrọ 7.Card na usoro nkwukọrịta: Kaadị CPU / kaadị itinye uche / kaadị SD. RS485, infrared, ụgbọelu eletriki ike
8. Ozi omumu: ikike onodu oku nke onwa n’onwa na onwa gara aga, uru ngosiputa eletriki eletrik na ngụkọta ngụkọ ike elele, ụbọchị na oge ugbu a, koodu mkpu ma ọ bụ n’oge, oge nkwukọrịta, ọnụ ọgụgụ nkwukọrịta, ọnụ ọgụgụ mita nke ike eletrik. wdg
9.Mate mgbawa na NB modul: A na-eji mgbawa igwe elele na-atụ ike bidirectional na-arụ ọrụ na ike akụkụ anọ na-arụ ọrụ ike. Ihe nnota nke kompeni a na-agba n’otu n’otu, na-anabata ikewapụ voltaji.
10.Orụ ọrụ arụmọrụ- ịgbanwee nwere
Accessdị nnweta ụdị nnweta ma ọ bụ ụdị nnabata, ngbanwe arụmọrụ arụ ọrụ
arụnyere: arụnyere obere ihe na-emebi ihe n’ime mita ahụ, a na-agbakwunye mita ahụ, uru: usoro dị mfe na ọnụahịa dị ọnụ ala
11.Họrọ nhọrọ-ngbanwe mpụga
Accessdị nnweta ụdị nnweta ma ọ bụ ụdị nnweta transperent, ụdị nhọrọ-ịgbanwee mpụga
ịgbanwee mpụga: a na-edobe obere ihe na-emebi elekere dị iche iche, mita eletrik na-ahụ maka mmeghe / mmechi nke onye na-emebi ihe sekit na mpụga site na akara njikwa.
uru: mpụga sekit, nkwụsị dị ugbu a, ọ dịghị mfe mmebi.
———Nka na ụzụ———
Refere ọkụ 3 × 220 / 380V
Nkọwapụta ugbu a 3 × 1.5(6)A3 × 5(20)A3 × 10(40)A3 × 5(60)A3 × 20(80)A
Oge akara 50Hz
Izi ezi Ọkwa nọ n'ọrụ 0,5, Agba Ọkwa 2, 0.5seconds / ụbọchị
Ike oriri Ahịrị voltaji: <= 1.5W, 5VA; ahịrị ugbu a: <1VA
Odi okpomoku Udiri oru na aru oru -25 ~ 55degree, oke okpomoku na aru oru -40 ~ 70 ogo
Mita Constant (imp / kWh) 6400,400,240
Nkwukọrịta RS485: 2400bps Infrared: 1200bps DL / T645-2007
———Esdị Njikọ Waya———
Idozi eletriki elekere na igbe nke mita, ma jikọọ nyocha dị ka eserese ahụ si chọọ. A na-atụ aro ka iji ọla kọpa ma ọ bụ ọdụ ọla kọpa. Ekwesịrị imechi skru dị na igbe ọnụ iji zere ire ọkụ n'ihi kọntaktị na-adịghị mma ma ọ bụ waya dị oke mkpa.
Nke gara aga: Single eletriki ume eletrik
Osote: Usoro elekere eletriki elekere atọ
Atọ Digital Energy Mita
Atọ elekere eletriki atọ
Atọ Ike Mita
Kaadị atọ Ic Card Smart Prepaid Energy Mita
Atọ nke Kwh Mita
Atọ Smart Energy Mita